Flight Simulator 2004 - Fiaramanidina taloha
Ny fisintomana rehetra ho an'ny Flight Simulator 2004 - Fiaramanidina taloha
Nohavaozina taminy 2 Apr 2018
Nohavaozina taminy 19 Aug 2017
Nohavaozina taminy 21 Aug 2015
6 818 5.00 (1)
Noforonina 5 Jul 2013
Izany dia ahitana entana ny fiaramanidina sy ny sidina drafitra natao mba hilaza ny tantaran 'ny 617 ambany fiadidiako, RAF Dambuster nanafika ny tany Moehne sy Edera tohodrano 16 - 17th May 1943.
6 947 4.50 (2)
Noforonina 3 Jul 2013
Yakovlev YAK-42 Versi 2.0 ho an'ny FS2004, modely ivelany tsara tarehy dia ahitana ravina roa UR-42369 Lviv Airlines ary Aeroflot Yak-42 CCCP-42336, takelaka 2D natao manokana ho an'io add-on, vakio ny dosie. Tena tsara ny manidina, miaraka amin'ity fanatanterahana ity.
7 696 4.50 (2)
Noforonina 3 May 2013
Nohavaozina taminy 4 May 2013
Ho an'ireo mpankafy ny Caravelle malaza (noforonin'i AFG) dia tadiavo ity fiaramanidina mahafinaritra ho an'ny FS2004 ity, ny simulation natosika ho amin'ny tena zava-misy mahagaga sy mahagaga, ity add-on tsy hamela anao tsy hiraharaha.
Waco NWA andian-tsambo FS2004
4 862 5.00 (1)
Noforonina 5 Mar 2013
Nohavaozina taminy 6 Mar 2013
Ny fonosana ahitana ny Golden Age Simulations CTO modely aseho ho toy avaratra andrefana Airways Waco sambo satria niasa ho toy ny fiaramanidina fanompoana ao 1929-1936.
Nosoratan'i Vladimir Gonchar
4 959 4.00 (2)
Mandoa vola taloha, ity add-on raha maimaim-poana izany dia ho tia ireo modely amin'ny ady taorian'ny ady. Ao anatin'izany ny textures efatra, feo mahazatra ary sipa virtoaly tena mahafinaritra.
8 025 4.50 (2)
7 053 5.00 (1)
Nohavaozina taminy 21 Dec 2012
Pakage ahitana telo Aircraft (Mpandeha sy Cargo) amin'ny fiaramanidina fanao modely sy ny kobany sy ny vanim-potoana dia manasongadina gauges, mora-to-mamaky clickable virtoaly cockpits, tsara tarehy trano fialan-tsasatray interiors, ary tsara ivelany textures namolavola tamin-kafetsena. Marina radiala Custom efa mahazatra tafiditra.
Nosoratan'i Milton Shupe, Nigel Richards, John Smith, James Banks
3 909 4.00 (1)
8 077 3.73 (11)
Noforonina 27 Dec 2010
Feno fonosana ho an'ity mahafinaritra ity add-on izay ahitana modely roa, dikan-tafika ary dikan-panjakana sivily, ahitana soratra dimy, feo tsara ary zohy virtoaly
Nosoratan'i Terry Jones, Libardo Guzman, Tom Gibson, Greg Pepper
4 558 3.57 (7)
Noforonina 17 Dec 2010
Ny Boeing XB-15 baomba no nitranga fahiny ela-isan-karazany, natao am-boalohany toy ny XBRL-1. Ny fiaramanidina no nampiasain'ny USAAC alohan'ny niova fo ho fitaterana fiaramanidina sy redesignated XC-105.
Nosoratan'i George Diemer
4 549 3.50 (6)
Noforonina 2 Aug 2010
Nosoratan'i Victor Astiz, Gary Jones, Damian Radice
4 825 3.83 (6)
Fiaramanidina frantsay tsara be ny fiaramanidina avo lenta, anisan'izany ny kabine virtoaly virtual sy 2D. Andininy roa no tafiditra amin'izany: Air France sy Air Force
Nosoratan'i Emannuel Geffroy (Restauravia.com)
4 802 4.33 (6)
Ny Nord 3202 dia tokana-maotera monoplane fiaramanidina, natao ho an'ny mpanamory fampianarana
4 734 4.13 (8)
Frantsay mpiady for FS2004 avy amin'ny Ady Lehibe II, tsara tarehy modely amin'ny virtoaly cockpit, fomba amam-panao sy ny maro feo textures, tonga lafatra ho an'ny mpankafy ny ady lehibe faharoa. Kalitao avo
5 318 4.20 (5)
Noforonina 29 Sep 2009
Nohavaozina taminy 27 Aug 2012
Ireto misy modely roa amin'ny fiaramanidina angano The A-28 Destroyer ary ilay XA-38 Grizzly. Ahitsy, samy tsara add-ons mampiseho kalitao miavaka
Nosoratan'i Milton Shupe, Scott Thomas, Damian Radice, Tom Falley et son de Steve Buchanan
Fampidinana: Pejy 1 amin'ny 2 Valiny 1 - 19 amin'ny 32